फर्केर हेर्दा दुर्गेशकाे जिन्दगी, भारतीय सेनाबाट भाग्नेदेखि चाउचाउ खाएर रात बिताउनेसम्म! (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > फर्केर हेर्दा दुर्गेशकाे जिन्दगी, भारतीय सेनाबाट भाग्नेदेखि चाउचाउ खाएर रात बिताउनेसम्म! (भिडियो)
admin July 28, 2020 जीवनशैली, भिडियो	0
दुर्गेश थापा अहिलेको युवा पुस्ताले सुनेको नाम हो तर दुर्गेश भारतीय सेनाबाट भागेर नहिँडेका भए आज उनलाई चिन्ने कमै हुन्थे । उनलाई मात्र आफ्नो परिवार र आफन्तले मात्र चिन्थे ।
दुर्गेशका बुबा भारतीय आर्मी भएकाले लक्का जवान छोरा पनि भारतीय आर्मी नै बनोस भन्ने चाहन्थे,भारतको सिक्किममा जन्मिएका उनी १२ वर्षको उमेरमा बागलुङ फर्किए तर उनको स्थायी घर बाग्लुङको गल्कोट हो । उनि सानो छदा लोक गीत गुनगुनाउथे भने सानैदेखि गायक र मोडल बन्ने सपना पालेका थिए ।
अन्तत परिवार को चाहना मा १८ वर्षकै उमेरमा दुर्गेश बाबुसँगै भारत गएर भारतीय सेनामा भर्ती भए तर उनको त्यो रहर भन्दा पनि बाध्यता मात्र थियो । दुर्गेश त्यहाँ बस्न नै सकेनन बुवा आमाको सपना चक्नाचुर पारेर भागेर नेपाल आए दुर्गेश ।
उनको यो कदम ले घरको अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि परिवारका सदस्यहरूले नै दुर्गेशको वास्ता गर्न छाडे, बुबाआमासँग बोलचाल नै बन्द भयो । दुर्गेशलाई आमा बुवाले वास्ता नै गर्न छाडे ।
बाकी भिडियो हेर्नुहोस
ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रममा ओली लाई गा ली गरेपछि माइतिघरमा कु टा कुट भयो भा गाभा ग (भिडियो हेर्नुहोस)